တိုကျခနျးဝယျလြှငျ အခှနျဆောငျဖို့ လိုပါသလား ? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
တိုကျခနျးဝယျလြှငျ အခှနျဆောငျဖို့ လိုပါသလား ?
21 Nov 2020 1:19 pm တှငျ တငျခဲ့သညျ
3203 ကွိမျ ကွညျ့ရှု့ပွီး
''တိုကျခနျးအရောငျးအဝယျ မှာ အခှနျဆောငျရပါသလား''ဟု မိတျဆှတေဈဦးက စာရေးသူထံ လာရောကျဆှေးနှေးလာပါသညျ။
''တိုကျခနျး ဝယျရောငျးလုပျဖို့ စိတျကူးလို့လား''
''ဝယျရောငျးဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့တော့ မဟုတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခုကာလက တိုကျခနျးတှေ အဝယျမလိုကျတော့ ဈေးသငျ့တာနဲ့ ဝယျထားမလားစိတျကူးလို့ပါ''
''မှနျပါတယျ။ အရငျကာလထကျတော့ အိမျခွံမွတေိုကျခနျး တှေ အရောငျးအေးနတောအမှနျ ပဲ''
''အခြို့က ပွောတော့ အိမျ ခွံ မွေ ဝယျရငျ အခှနျဆောငျတဲ့ အတိုငျး တိုကျခနျးဝယျရငျလညျး အ ခှနျဆောငျရမယျလို့ ပွောတာနဲ့ သူငယျခငျြးဆီလာဆှေးနှေးတာ''
''အေး၊ လောလောဆယျက တော့ အခှနျဆောငျခွငျး၊ မဆောငျခွငျးက အဓိက မဟုတျဘူး။ မိမိ ဝယျမယျ့ တိုကျခနျးဟာ အရှုပျအရှငျးကိစ်စတှရှေိ၊ မရှိ စုံစမျးဖို့က အဓိကပဲ''
''အကွမျးဖငျြးပွောပွပါဦး၊ ဘယျအခကျြတှကေိုစုံစမျးမေးမွနျး ထားရမယျဆိုတာ''
''အခုဝယျမယျလို့ စဉျးစား ထားတဲ့ အဆောကျအအုံကအသဈလား၊ လူနပွေီးသားတိုကျခနျး တှလေား''
''အသဈပဲ၊ အခုမှ ဆောကျပွီးတာ တဈလခနျ့ပဲရှိမယျ ထငျတယျ''
''ပထမဆုံး အခကျြက မိမိဝယျမယျ့ တိုကျခနျးဟာ ကနျ ထရိုကျတာက အခြိုးကရြရှိထား တဲ့ တိုကျခနျးလား၊ မွပေိုငျရှငျရရှိ မယျ့ တိုကျခနျးလားဆိုတာ သိထား ဖို့လိုတယျ''
''ကနျထရိုကျတာရမယျ့ အခနျးမြားထဲက တဈခနျးကို ပွောတာပဲ''
''ကနျထရိုကျတာ အခနျးဆိုရငျတော့ နညျးနညျးသတိထားဖို့ လိုတယျ၊ ဆောကျလုပျရေးလုပျနေ စဉျ ငှအေရငျးအနှီးပွတျသှား လို့ ပေါငျနှံထားတဲ့ အခနျးတှရှေိတတျ တယျ။ ရမေီးစုံ မစုံ၊ မျောတာ၊ မီ တာ သီးခွားစီရှိမရှိ စိစဈဖို့ လို တယျ''
''ရကေ အဝီစိတှငျးလို့ ပွောတယျ။ တိုကျခနျးတိုငျးမှာ မျောတာတဈလုံးစီ၊ မီတာတဈခုစီတပျပေး ထားတယျလို့ သိရတယျ''
''အရေးကွီးဆုံးကတော့ လူ နထေိုငျခှငျ့အတှကျ ခှငျ့ပွုမိနျ့၊ စာ ရှကျစာတမျးရှိဖို့ပဲ သူငယျခငျြး''
''အေး-အဲဒါက အဓိကပဲ၊ လူနထေိုငျခှငျ့မရသေးဘဲ တကျနကွေ တာ အမြားကွီးဖွဈနတေယျ''
''လြှောကျထားဆဲဆိုရငျ ဖွဈ =သလား''
''ဒါလညျး သခြောမေးကွညျ့ ဖို့လိုမယျ၊ လြှောကျထားတဲ့ စာရှကျ စာတမျးတှကွေညျ့ရရငျတော့ သေ ခြာတာပေါ့''
''ဥပဒကေတော့ ဖယျရှားတဲ့ အထိလုပျပိုငျခှငျ့ရှိတယျ။ ဒဏျငှဆေောငျပွီး နထေိုငျခှငျ့အမိနျ့ လြှောကျတာလညျးရှိပါတယျ''
''ဒါက ကနျထရိုကျတာက လုပျပေးရမှာ မဟုတျလား''
''ကနျထရိုကျတာက ကုနျကြ စရိတျမခံနိုငျတာနဲ့ အခနျးတှေ အပျပွီး ထှကျသှားတာတှေ အမြိုး မြိုးရှိတယျ။ ဒီအခကျြကနောကျ တော့ ထပျဆှေးနှေးတာပေါ့၊ အခု သူငယျခငျြးပွောတဲ့ အခှနျအ ကွောငျး ဆှေးနှေးရအောငျ''
''ပွညျထောငျစု၏ အခှနျအ ကောကျဥပဒမှော နိုငျငံသားမညျ သူမဆို၊ အခွပေစ်စညျး တဈရပျရပျ ကို ဝယျယူခွငျး၊ တညျဆောကျခွငျး ရယူခွငျးနှငျ့ လုပျငနျးသဈတညျ ထောငျခွငျး၊ လုပျငနျးသဈထပျမံ တိုးခြဲ့ခွငျး ကိစ်စရပျတှမှော အခှနျကောကျခံတဲ့ နှုနျးထားတှေ ပွဋ်ဌာနျး ထားတယျ''
''အခွပေစ်စညျးဆိုတာက ဘာ ကိုဆိုလိုတာလဲ''
''အိမျ ခွံ မွေ၊ တိုကျခနျးကို ဆိုလိုတာဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ တိုကျခနျးဝယျရငျ ဥပဒအေရတော့ အခှနျပေးဆောငျရမှာပဲဖွဈတယျ''
''အခြို့လညျး ဝယျခှနျမ ဆောငျဘဲ နကွေတာတှရှေိတယျ မဟုတျလား''
''မှနျပါတယျ။ မြားသောအား ဖွငျ့ တိုကျခနျးရောငျးဝယျတဲ့အခါ မှာ ဝယျခှနျမဆောငျဘဲနကွေတာ မြားပါတယျ။ မွကှေကျကိစ်စတှေ က တော့ အမညျပေါကျပွောငျးမယျဆို ရငျ ဝယျခှနျဆောငျပွီးသား ပွစော ပါမှ ဆောငျရှကျပေးတာဖွဈလို့ မဖွဈမနဝေယျခှနျဆောငျ ကွတာ ဖွဈတယျ။ တိုကျခနျးတှမှောတော့ မဖွဈမနေ ဝယျခှနျဆောငျရမယျ့ တငျးကပျြတဲ့ စညျးမဉျြးလုပျထုံး လုပျ နညျးထုတျပွနျ ထားတာမတှေ့ ရဘူး။ ဒီအခကျြကွောငျ့လညျး ဝယျခှနျမဆောငျဘဲ ရောငျးဝယျနေ ကွတာဖွဈတယျ''
''သကျဆိုငျရာဝနျကွီးဌာန က မွကှေကျတနျဖိုးစံနှုနျးသတျ မှတျပေးတာရှိတယျ မဟုတျလား''
''ရှိတယျ၊ အဲဒီစံနှုနျးပျေါမူ တညျပွီး တနျဖိုးဖွတျတာဖွဈတယျ''
''ဒီလိုဆိုရငျ တိုကျခနျးတှကေို စံနှုနျးထား သတျမှတျပေးတာရှိမှာ ပေါ့''
''ရှိတာပေါ့၊ ရနျကုနျတိုငျးအ တှငျးမှာရှိတဲ့ မွို့နယျအလိုကျ တိုကျခနျးအထပျပျေါ မူတညျပွီး တဈစတုရနျးပပေျေါမှာ တနျဖိုးစံနှုနျး သတျမှတျပေးထားပါတယျ''
''ဝယျခှနျဆောငျမယျဆိုရငျ အခုသတျမှတျထားတဲ့ စံနှုနျးအတိုငျး ဆောငျကွရမှာပေါ့''
''မှနျပါတယျ။ ဝယျခှနျဆောငျ မယျဆိုရငျ သကျဆိုငျရာတနျဖိုး ဖွတျအဖှဲ့ထံ တိုကျခနျးဝယျပွီး ရကျ ပေါငျး (၃ဝ) အတှငျး လြှောကျထားရပါတယျ။ အဲဒီရကျကြျောရငျ တော့ ဒဏျငှပေေးဆောငျရမှာဖွဈ တယျ''
''အရောငျးအဝယျ စာခြုပျ တငျပွရတာပေါ့''
''မှနျပါတယျ၊ အရောငျးအဝယျ စာခြုပျနဲ့အတူ ဝယျသူကိုယျတိုငျသှားရောကျပွီး တနျဖိုးဖွတျပေး ဖို့ လြှောကျလှာဖွညျ့စှကျတငျသှငျး ရမှာဖွဈတယျ။ အခကျအခဲမရှိ အောငျ သကျဆိုငျရာ အခှနျရုံးက ညှနျကွားပွသ အကူအညီပေးသှား မှာဖွဈတယျ''
''ဒါကတော့ ရှငျးပါတယျ။ ပထမဆုံးအခကျြကတော့ ဝငျငှရေလမျး မဖျောပွနိုငျတဲ့ ငှပေမာဏက ငှဖွေူအဖွဈ ရရှိသှားမှာဖွဈပါ တယျ''
''ပွနျရောငျးရငျတော့ ဝယျစဉျက သတျမှတျထားတဲ့ စံနှုနျးနဲ့ ရောငျးစဉျက ရရှိတဲ့အမွတျအစှနျးမှာပဲ ၁ဝ ရာခိုငျ နှုနျးဆောငျရမှာ ဖွဈတယျ။ ရောငျးရငှပေျေါမှာ ဆောငျရ မှာမဟုတျဘူး''
''ပိုငျဆိုငျခှငျ့နဲ့ ပတျသကျရငျတော့ ဝယျခှနျဆောငျတာ က ကောငျးတာပေါ့နျော''
''မှနျပါတယျ။ အခြို့တိုကျခနျးတှမှော ပေါငျနှံထားတာ တှေ၊ အရောငျးထပျနတောတှေ ဖွဈတတျတယျ။ အဲဒီလို အခွအေနမြေိုးမှာ ဆိုရငျ ဝယျခှနျပေးဆောငျထားသူက ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရမှာမို့ အကောငျးဆုံးကတော့ ဝယျခှနျပေး ဆောငျထားကာ အကောငျးဆုံးပဲ သူငယျခငျြး''ဟု အကွုံပွု ဆှေးနှေးပေးလိုကျပါသညျ။
Credit : Zaygwet ထီယု (ဥပဒအေတိုငျပငျခံ)
တိုက်ခန်းဝယ်လျှင် အခွန်ဆောင်ဖို့ လိုပါသလား ?
''တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ် မှာ အခွန်ဆောင်ရပါသလား''ဟု မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာရေးသူထံ လာရောက်ဆွေးနွေးလာပါသည်။
''တိုက်ခန်း ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးလို့လား''
စာရေးသူက မိတ်ဆွေအား မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
''ဝယ်ရောင်းဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုကာလက တိုက်ခန်းတွေ အဝယ်မလိုက်တော့ ဈေးသင့်တာနဲ့ ဝယ်ထားမလားစိတ်ကူးလို့ပါ''
''မှန်ပါတယ်။ အရင်ကာလထက်တော့ အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း တွေ အရောင်းအေးနေတာအမှန် ပဲ''
''အချို့က ပြောတော့ အိမ် ခြံ မြေ ဝယ်ရင် အခွန်ဆောင်တဲ့ အတိုင်း တိုက်ခန်းဝယ်ရင်လည်း အ ခွန်ဆောင်ရမယ်လို့ ပြောတာနဲ့ သူငယ်ချင်းဆီလာဆွေးနွေးတာ''
''အေး၊ လောလောဆယ်က တော့ အခွန်ဆောင်ခြင်း၊ မဆောင်ခြင်းက အဓိက မဟုတ်ဘူး။ မိမိ ဝယ်မယ့် တိုက်ခန်းဟာ အရှုပ်အရှင်းကိစ္စတွေရှိ၊ မရှိ စုံစမ်းဖို့က အဓိကပဲ''
''အကြမ်းဖျင်းပြောပြပါဦး၊ ဘယ်အချက်တွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်း ထားရမယ်ဆိုတာ''
''အခုဝယ်မယ်လို့ စဉ်းစား ထားတဲ့ အဆောက်အအုံကအသစ်လား၊ လူနေပြီးသားတိုက်ခန်း တွေလား''
''အသစ်ပဲ၊ အခုမှ ဆောက်ပြီးတာ တစ်လခန့်ပဲရှိမယ် ထင်တယ်''
''ပထမဆုံး အချက်က မိမိဝယ်မယ့် တိုက်ခန်းဟာ ကန် ထရိုက်တာက အချိုးကျရရှိထား တဲ့ တိုက်ခန်းလား၊ မြေပိုင်ရှင်ရရှိ မယ့် တိုက်ခန်းလားဆိုတာ သိထား ဖို့လိုတယ်''
''ကန်ထရိုက်တာရမယ့် အခန်းများထဲက တစ်ခန်းကို ပြောတာပဲ''
''ကန်ထရိုက်တာ အခန်းဆိုရင်တော့ နည်းနည်းသတိထားဖို့ လိုတယ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်နေ စဉ် ငွေအရင်းအနှီးပြတ်သွား လို့ ပေါင်နှံထားတဲ့ အခန်းတွေရှိတတ် တယ်။ ရေမီးစုံ မစုံ၊ မော်တာ၊ မီ တာ သီးခြားစီရှိမရှိ စိစစ်ဖို့ လို တယ်''
''ရေက အဝီစိတွင်းလို့ ပြောတယ်။ တိုက်ခန်းတိုင်းမှာ မော်တာတစ်လုံးစီ၊ မီတာတစ်ခုစီတပ်ပေး ထားတယ်လို့ သိရတယ်''
''အရေးကြီးဆုံးကတော့ လူ နေထိုင်ခွင့်အတွက် ခွင့်ပြုမိန့်၊ စာ ရွက်စာတမ်းရှိဖို့ပဲ သူငယ်ချင်း''
''အေး-အဲဒါက အဓိကပဲ၊ လူနေထိုင်ခွင့်မရသေးဘဲ တက်နေကြ တာ အများကြီးဖြစ်နေတယ်''
''လျှောက်ထားဆဲဆိုရင် ဖြစ် =သလား''
''ဒါလည်း သေချာမေးကြည့် ဖို့လိုမယ်၊ လျှောက်ထားတဲ့ စာရွက် စာတမ်းတွေကြည့်ရရင်တော့ သေ ချာတာပေါ့''
''ဥပဒေကတော့ ဖယ်ရှားတဲ့ အထိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒဏ်ငွေဆောင်ပြီး နေထိုင်ခွင့်အမိန့် လျှောက်တာလည်းရှိပါတယ်''
''ဒါက ကန်ထရိုက်တာက လုပ်ပေးရမှာ မဟုတ်လား''
''ကန်ထရိုက်တာက ကုန်ကျ စရိတ်မခံနိုင်တာနဲ့ အခန်းတွေ အပ်ပြီး ထွက်သွားတာတွေ အမျိုး မျိုးရှိတယ်။ ဒီအချက်ကနောက် တော့ ထပ်ဆွေးနွေးတာပေါ့၊ အခု သူငယ်ချင်းပြောတဲ့ အခွန်အ ကြောင်း ဆွေးနွေးရအောင်''
''ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အ ကောက်ဥပဒေမှာ နိုင်ငံသားမည် သူမဆို၊ အခြေပစ္စည်း တစ်ရပ်ရပ် ကို ဝယ်ယူခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း ရယူခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းသစ်တည် ထောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်ထပ်မံ တိုးချဲ့ခြင်း ကိစ္စရပ်တွေမှာ အခွန်ကောက်ခံတဲ့ နှုန်းထားတွေ ပြဋ္ဌာန်း ထားတယ်''
''အခြေပစ္စည်းဆိုတာက ဘာ ကိုဆိုလိုတာလဲ''
''အိမ် ခြံ မြေ၊ တိုက်ခန်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တိုက်ခန်းဝယ်ရင် ဥပဒေအရတော့ အခွန်ပေးဆောင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်''
''အချို့လည်း ဝယ်ခွန်မ ဆောင်ဘဲ နေကြတာတွေရှိတယ် မဟုတ်လား''
''မှန်ပါတယ်။ များသောအား ဖြင့် တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်တဲ့အခါ မှာ ဝယ်ခွန်မဆောင်ဘဲနေကြတာ များပါတယ်။ မြေကွက်ကိစ္စတွေ က တော့ အမည်ပေါက်ပြောင်းမယ်ဆို ရင် ဝယ်ခွန်ဆောင်ပြီးသား ပြေစာ ပါမှ ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်လို့ မဖြစ်မနေဝယ်ခွန်ဆောင် ကြတာ ဖြစ်တယ်။ တိုက်ခန်းတွေမှာတော့ မဖြစ်မနေ ဝယ်ခွန်ဆောင်ရမယ့် တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံး လုပ် နည်းထုတ်ပြန် ထားတာမတွေ့ ရဘူး။ ဒီအချက်ကြောင့်လည်း ဝယ်ခွန်မဆောင်ဘဲ ရောင်းဝယ်နေ ကြတာဖြစ်တယ်''
''သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန က မြေကွက်တန်ဖိုးစံနှုန်းသတ် မှတ်ပေးတာရှိတယ် မဟုတ်လား''
''ရှိတယ်၊ အဲဒီစံနှုန်းပေါ်မူ တည်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်တာဖြစ်တယ်''
''ဒီလိုဆိုရင် တိုက်ခန်းတွေကို စံနှုန်းထား သတ်မှတ်ပေးတာရှိမှာ ပေါ့''
''ရှိတာပေါ့၊ ရန်ကုန်တိုင်းအ တွင်းမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်အလိုက် တိုက်ခန်းအထပ်ပေါ် မူတည်ပြီး တစ်စတုရန်းပေပေါ်မှာ တန်ဖိုးစံနှုန်း သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်''
''ဝယ်ခွန်ဆောင်မယ်ဆိုရင် အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်းအတိုင်း ဆောင်ကြရမှာပေါ့''
''မှန်ပါတယ်။ ဝယ်ခွန်ဆောင် မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုး ဖြတ်အဖွဲ့ထံ တိုက်ခန်းဝယ်ပြီး ရက် ပေါင်း (၃ဝ) အတွင်း လျှောက်ထားရပါတယ်။ အဲဒီရက်ကျော်ရင် တော့ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ် တယ်''
''အရောင်းအဝယ် စာချုပ် တင်ပြရတာပေါ့''
''မှန်ပါတယ်၊ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်နဲ့အတူ ဝယ်သူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်ပေး ဖို့ လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်တင်သွင်း ရမှာဖြစ်တယ်။ အခက်အခဲမရှိ အောင် သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးက ညွှန်ကြားပြသ အကူအညီပေးသွား မှာဖြစ်တယ်''
''ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်ကတော့ ဝင်ငွေရလမ်း မဖော်ပြနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏက ငွေဖြူအဖြစ် ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါ တယ်''
''ပြန်ရောင်းရင်တော့ ဝယ်စဉ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်းနဲ့ ရောင်းစဉ်က ရရှိတဲ့အမြတ်အစွန်းမှာပဲ ၁ဝ ရာခိုင် နှုန်းဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ရောင်းရငွေပေါ်မှာ ဆောင်ရ မှာမဟုတ်ဘူး''
''ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဝယ်ခွန်ဆောင်တာ က ကောင်းတာပေါ့နော်''
''မှန်ပါတယ်။ အချို့တိုက်ခန်းတွေမှာ ပေါင်နှံထားတာ တွေ၊ အရောင်းထပ်နေတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ဆိုရင် ဝယ်ခွန်ပေးဆောင်ထားသူက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာမို့ အကောင်းဆုံးကတော့ ဝယ်ခွန်ပေး ဆောင်ထားကာ အကောင်းဆုံးပဲ သူငယ်ချင်း''ဟု အကြုံပြု ဆွေးနွေးပေးလိုက်ပါသည်။
Credit : Zaygwet ထီယု (ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ)
တိုက်ခန်း အခွန် ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
တောငျဥက်ကလာပရှိ နထေိုငျရနျ အသငျ.တိုကျခနျး
၁၂ ပခှေဲ ပေ ၅၀၊ ၄ လှာ၊ ၃၇ လမျး
ဘုရငျ့နောငျလမျးမ လူနအေိမျနှငျ့ ကုမ်မဏီဖှငျ့ရနျ...